Faa Faahin: Howlgal dad lagu qabqabtay oo laga sameeyey Jowhar | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Faa Faahin: Howlgal dad lagu qabqabtay oo laga sameeyey Jowhar
Wararka saakay laga helayo Magaalada Jowhar ee Caasimadda Hir-Shabeelle ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi ay Maanta howlgallo kala duwan ka sameeyeen Ciidamada Booliiska Magaladaasi.
Howlgalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii xalay Magaalada Jowhar qarax bambaano oo Gurigooda lagu weeraray lagu dilay gudoomye kuxigeenkii amniga Gobolka Sh/Dhexe Muxumed Sugaal iyo Wiil uu dhalay oo dadiisa lagu qiyaasay 9 jir.
Ciidamada ayaa waxaa ay sigaar ah howlgalka uga sameeyeen Xaafada Hani-Wadaag gaar ahaan laanta 2aad ee Baryare,halkaasi oo uu ku yaallo Guriga Guddoomiye kuxigeenkii Amniga Shabeellaha Dhexe.
Wararka ayaa waxaa ay sheegayaan in Ciidamada Booliska Hir-Shabeelle ay howlgalka ku qab qabteen dad u badan dhalinyaro,kuwaas oo laga shakiyey,hayeeshee badankood la siidaayey.
Saraakiil ka tirsan Booliska Hir-Shabeelle ayaa waxaa ay sheegeen in dadka howlgalka lagu qabtay baaritaano lagu sameyn doono cidii dambi lagu helo sharciga lala tiigsan doono dadka kalena la siideyn doono.
Al-Shabaab ayaa bilihii la soo dhaafay waxaa ay kordhiyeen weerada ay ka fulinayaan deegaano ka tirsan Gobolka Shabeellaha Dhexe, iyada oo Saddexdii bilood ee la soo dhaafay dileen mas’uuliyiin sar sare iyo saraakiil Ciidan.
Previous articleJames Swan oo ka hadlay laba sano kadib qarixii Isgoyska Soobe
Next articleAxmed Madoobe oo ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab